ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 81
ကိုဇာဂနာနဲ့ ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲစည်ကားသိုက်မြိုက် ဓာတ်ပုံသတင်း၊(Media Credit – ကိုဒေါ်နယ်၊ ကိုမိုက်မင်းမင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ချာဘိုးကောလိပ်ခန်းမမှာ ဇာဂနာနဲ့ မြန်မာမိသားစုများ မိတ်ဆုံပွဲတော်ကို ကျင်းပရာ ဘေးဧရိယာရောက် မြန်မာမိသားစုဧည့်ပရိသတ် ၁၀၀၀ နီးပါး တက်ရောက် အားပေးကြပါတယ်။ စွယ်စုံရ လူရွှင်တော်၊ အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာ မြန်မာမိသားစုများနဲ့ မိတ်ဆက်ဟောပြောမှုများအပြင် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်က ဇာတ်ကားများ၊ ဆုရဒါရိုက်တာများရဲ့ ကားသစ်များနဲ့ ၈၈ မျုိးဆက်တို့ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတို့ကို တင်ဆက်ပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့ မိသားစုများ စောင့်ရှောက်ကူညီရေး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေတဲ့...
လှိုင်သာယာ အလုပ်သမားသပိတ် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ Yangon Press International – ဓာတ်ပုံသတင်း။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ နံနက်ကတည်းက လှိုင်သာယာ၊ တိုင်ယီစက်ရုံအလုပ်သမား အမျိုးသမီးများက သူတို့၏ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုများကို ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလျုက်ရှိသည်။ ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူက သက်ဆုိုင်ရာတို့နှင့်ြ ၀ါဏိဇ္ဇပဋိပက္ခရုံးသွားတင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၁ နာရီခွဲအထိ လူစုမကွဲသေးဟု သိရသည်။ ကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့၏ နိုင်/ကျဉ်းမိသားစုများ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်က စားသောက်စရာများ လာလှူကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးဝင်းချိုက အမေရိကန်ပြည်က စေတနာရှင်များ လှူဒါန်းသည့် အလှုငွေများ (၂ သိန်း ကျပ်) လာရောက်လှူဒါန်းကြောင်း၊ အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များ စိတ်ဓာတ်မကျရေး၊ တောင်းဆိုချက်များရသည်အထိ ဆက်လက်ရပ်တည်ရေးတို့ကို အားပေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။ လူအင်အား ၁ ထောင်ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။...
ရွှေည၀ါဆရာတော် သာဓုကျောင်းမှ ထွက်ခွာရပြီ ၀ိုင်ပီအိုင် ဓာတ်ပုံသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟအား ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉) နောက်ဆုံး ထွက်ခွာရန် သံဃမဟာနာယကမှ အမိန့်ချမှတ်ထားသည့် အတိုင်း ဆရာတော် ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုပရိယတ္တိကျောင်းမှ ထွက်ခွာပေးရပြီး လောလောဆယ်တွင် မှော်ဘီမြို့ နှောကုန်းကျေးရွာအနီး လှူထားသည့် မြေနေရာတွင် ယာယီတဲထိုး၍ သီတင်းသုံးမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့မှော်ဘီမြို့သို့ထွက်ခွာ ရာတွင် ဒါယကာများ၊ သံဃာများ၊ သီလရှင်များနှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်အချို့ပါ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ (Yangon Press International – facebook) No tags for this post.
ဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဓာတ်ပုံများ – NLD facebook လှည်းကူး NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်၊ လှည်းကူးတွင် ၀င်ပြိုင်မည့် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့အတွက် ထိုဒေသများသို့ သွားရောက် မဲဆွယ် စည်းရုံးခဲ့သည်။ No tags for this post.
ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် NLD ရုံး ဆိုင်းဘုတ်​တင်ပွဲ၊ ရုံးခန်းဖွ​င့်ပွဲတို့ကို ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးသမား အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံများ – NLD) No tags for this post.
ဓာတ်ပုံသတင်း/အသံဖိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်မြို့သို့ ယနေ့ သွားရောက်ပြီး ဒေသခံလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများ – Messenger သတင်းဂျာနယ်၊ အသံဖိုင် – DVB No tags for this post.